You might also like this Widget for blogger or Related post widget ~ IT Guide Myanmar
ကျနော့ရဲ့ဘလော့မိတ်ဆွေတယောက်က “ကိုနိုင် လာလည်သွားပါတယ်ဗျာ။ You might also like ထည့်ပုံလေး ပြောပြပါလားဗျာ။ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာလည်း တင်ချင်လို့ပါ” ဆိုလို့ ဒီဘလော့လေးမှာလည်း ကျနော်အသုံးပြုထားတဲ့ ဘလော့ဂါနည်းပညာ လေးကို ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်
how to add YOU MIGHT ALSO LIKE widget:
1 . ပထမဦးဆုံး LinkWithin ဆိုဒ်ကိုသွားလိုက်ပါ။အောက်ကပုံနဲ့ web page တခု ကျလာပါလိမ့်မယ်။
2 . အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံအတိုင်း 1,2,3,4 အဆင့်ဆင့် ဖြည့်ပေးရွေးပေးပြီး Get Widget! ကိုနှိပ်ပါ
ပထမဆုံး အပေါ်ကပုံအတိုင်း Email address ကို ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ...
ပြီးရင်တော့ blog ရဲ့ လိပ်စာကိုထည့်ပေးပါ ....
Plagform ဆိုတာမှတော့ ကိုယ်က Blogger နဲ့ရေးတာလား wordpress နဲ့ရေးတာလား ... အဲဒီ့မှာ Blog နဲ့ရေးတာဆိုတော့ ... Blogger ဆိုတာကလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ....
Width ဆိုတာမှာကကျတော့ ... ကိုယ်က ကိုယ့် blog ရဲ့ content width နဲ့ ညှိပြီးတော့ ပုံတွေကို ထည့်ရပါမယ်.... ၃ ပုံလား ၄ ပုံလား ၅ ပုံလား ... အဲဒါကလေးကိုရွေးပေးရပါမယ် ... ကိုယ့် blog ရဲ့ post ရေးတဲ့ width ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်နှပုံလောက်ဖြင့် ဆန့်မယ် ပေါ့ ... ရွေးပေးလိုက်ပါ ...
ပြီးရင်တော့ အောက်က Get widget ဆိုတဲ့ buttom ကြီးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်...
နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာပါ့မယ် ...
3 . အဲဒီ့မှာ Install Widget ဆိုတာကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ...
အဲဒီ့မှာမှ add widget ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါဦး ...
နှိပ်လိုက်ရင် blog ရဲ့ layout တွေ ပြောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါ့မယ် ..
အဲဒီ့မှာ link within ဆိုတာကလေးကို Blog posts ဆိုတာရဲ့ အောက်ကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါ ..
ပြီးရင်တော့ save ပေးပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ blog ကိုကြည့်လိုက်ပါ ...
ဒါဆိုရင် blog post ရဲ့ အောက်တွေ မှာ ပုံကလေးတွေ နဲ့ ခေါင်းစဉ်ကလေးတွေ နဲ့ ဖော်ပြပေးနေပါလိမ့်မယ် ...
အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက် ...
Window Media Player နဲ့ Rip လုပ်နည်း
အွန်လိုင်း တီဗွီ ကြည့်ဘို့ ReadonTV.v7500.AiO.Hypn...
Facebook မှာ မိမိ အွန်လိုင်းပေါ်ရှိနေတာကို လျှို့ဝှ...
Memory Card, SD ကဒ်များမှ delete လုပ်မိသော Data မျ...
Android App တွေကို PC မှာသုံးလို့ရမယ့် Blue Stacks...
Microsoft Security Essentials offline Updater
ဗွီဒီယို တည်းဖြတ်ခြင်းနည်းပညာ မြန်မာလို အီးဘွတ်(ဂ်...
USB drive တွေ format ချဘို့ Any DRIVE Formatter 2....
အခြေခံကွန်ပြူတာ လေ့လာသူများအတွက် Ghost အသုံးပြုနည်...
FastStone Capture v7.2 (Latest Version)
You might also like this Widget for blogger or Rel...
Video,Photo တွေကိုဆလိုက်ရှိူး လုပ်ဘို့ အကောင်းဆုံး...
gtalk ထဲမှာလူရှိန်အောင် location လိမ်ပြောတဲ့သူတွေက...
Google Toolbar ကို Firefox ဗာရှင်းပေါင်းစုံမှာ တင်...
hacker များရဲ့ အယူအဆများနှင့်လုပ်နည်းများ
Gmail Hecker များကို ကာကွယ်နိုင်မည့် အချက်6ချက်
မည်သည့် Driver ကိုမဆိုအကုန်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်
မိုဘိုင်းဖုန်းမှ Wi-Fi hotspot တည်ဆောက်ပြီး အင်တာန...